INONA NO LEGEND NY FILIPINA. OHATRA ANGANO ANGANO ANGANO FOLKLORE - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
INONA NO LEGEND NY FILIPINA. OHATRA ANGANO ANGANO ANGANO FOLKLORE
Fotsiny ny kely vondronosy na ny nosy
Ny tena andro voalohany izao tontolo izao, tsy misy atao hoe firenena ao FilipinaAry raha tsy mbola Filipina eo amin'izao tontolo izao dia nonina eto bardugala na ogre. Ny lava-bato ny olona goavam-be ao afovoan ny oseana Pasifika. Miaraka aminy velona ny telo vavy izay Minda, Lus sy Visayan. Ny andro ilaina handao ny ray ogre mihaza mihaza biby na any amin'ny faritra hafa ao amin'ny nosy.
Fepetra hijanona telo vavy iray tam-po ka pinagbilin izy telo: 'moa Ve aho mba hamela ny lava-bato'.
Ny fampianarana ny ray, 'fotsiny ho anao ny ao anatiny, satria misy loza sy ny loza tao ivelan'ny trano. Tsy niraikitra fa ny ray goavam-be, ny lamaody sy ny nagimis ny lava-bato ny rahalahy sy anabavy. Lininis izy ireo tsara fa masìna ianao, ny dadany. Saingy izy ireo dia tsy mpanampy ao ny fanaovana dia Minda, satria tsy mihaino sy mankatò ny ray. Izy ireo dia nahita fa ny sisa sahiratsy ny burrow dia Minda sy naglakwatsa ao amin'ny ranomasina. Tsy nanao veloma ny rahalahy sy anabavy. Fampiononana, fampaherezana Mindang milalao miaraka nagtilamsikan ao amin'ny ranomasina. Nagpasyal-jaunt izy ary efa tsy nahita fa lavitra fa izy no amoron-tsiraka sy ny amoron'ny ranomasina.
Raha izy no mandeha, ny onja goavana izay somary hafahafa mba hihinana amin'ny Minda.
Nitomany izy raha mitsoka ny onja goavana eo afovoan'ny ranomasina. 'Manampy ahy.' Mitomany ny Minda. Nandre nina Luz ary Dia nitomany Minda, satria tonga ny mitomany ao anaty ny cave. Nanakana ny fanaovana ny roa. 'Nahoana, Minda mangataka fanampiana.' hoy Luz fa nanlalaki ny maso amin'ny tsy nampoizina. 'Azo antoka fa, tonga hanafainganana antsika.' hoe 'Nahoana noho izany, inona no yun.'Dalian fa dia mihazakazaka eo amin'ny tany amoron-tsiraka ny ranomasina. Mieritreritra eto, lingon misy. Hitany inhale rano ny rahalahiny. 'Na, ao lavitra' mitomany mandritra izany fotoana izany fampianaran'i Luz'No ianao milomano dia Minda ah' hoy ny tsy misy, ny mihazakazaka kosa ny roa. Mandritra izany fotoana izany dia mitaraina ny Lus. Instantaneous nandeha nidina izy ireo nankany mba Minda, angady lalina any. Dia naka izy ireo ny tanany noho ny rahalahiny, satria izy ireo no namelatra ny onja goavana. Sideways-paling, daka, tonga ny tanana, nitomany, nikiakiaka hoe ary tsy nijanona beck.
Hijery avy ho anao fotsiny aho ao anaty lava-bato'
Indrisy anefa fa ny telo lady ny ogre dia tsy misy intsony. Rehefa goavana manontany tena hoe nahoana no tsy tonga ho azy. Teo aloha ampiasaina nakasigaw ny fahafinaretana ny telo ny hafa ny ankizy raha tonga velona. Tsy nisy ny telo ao ny lava-bato ny olona iray dia tsy misy. 'Izay ka nandeha hija ny zanako vavy.' Nanontany tena izy hoe 'Taiza ianao sy ny Luz, Minda, sy ny hira Fiderana.'Dia tsy misy ny valiny. View daty manodidina, na inona na inona misy.
Dia nandeha ny sasany nosy akaiky ny aloka na inona na inona.
'Angamba ka tsy nandeha ny olona ka nahatonga azy ireo naka.' dia hoy ny goavana ny tenany.
Tampotampoka teo dia nitatra ny indray sy ny kumulog ny malakaa.
Foana ny ray ary izy nihevitra izay omby maty an-drano tamin telo. Nifindra tany tena lavitra sy tsy mikorontana ny olona goavam-be. Hitany ny sisa amin ny sasany tapa-akanjo ny ankizy mihantona eo amin'ny vato. Ho an'ny lalandava izy nahita ny telo tanana atsangana sy mangataka fanampiana. Dia nahatsiaro tampoka fa tsy avela hitondra azy ireo. Hitsambikina any an-dranomasina ny goavam-be, ao an-tsaina afa-tsy ny lalana izy ny sary ny telo-tanana atsangana izy, dia very ny hery.
'Ny ankizy, ny zavatra hafa rehetra.
Tsy nisy fa' Antontan ny fofonaina ny ray. Mitsangana, mipetraka, mijery lavitra. Iray amin'ny iray, dia nijery tany kely rehetra ny vato sy ny hazo tao an-lavitra hafa. Ary ny reraka sy ny hatsembohana, nipetraka teo ambonin'ny vatolampy sy tsy tsy nahita tory. Ela rendrehana ny anaran ny mahantra goavana. Tsy nifoha ny goavana, pinunas ny masony, dia tsy nahita na inona na inona teo aloha. Hitsangana tampoka teo, ary nijery tsara. 'Inona izany Aiza ny fivoriana telo ireo. Izy ireo ka ny telo tamin'izy ireo.' Ny herin ny tena, dia miha-mitombo mampalahelo ny fihetseham-po ny ray kamboty. 'Ny fivoriana telo ireo sina Luz, Minda, ary maro izany.' hoy izy tamin'ny feo mafy. Ary hatramin izao antsoina hoe ny Luzon, Visayan sy ny Ranomasina ny nosy telo.
Tonga eto ny firenena ao Filipina. Any atsimon'i Azia Izany dia tafiditra ao Filipina ao amin'ny faritra atsimon'i Azia.
Volamena Lesona Ara-moraly: ny Fanaovana ny adidy ny rahalahiny.
Henoy ny zokiny sy ny ray aman-dreny.
Izany dia ilaina mba hiroborobo ao amin'ny firenena ny Filipina. Ny Tantara ny fandalinana ny zava-mitranga ao anatin'ny vanim-potoana sy ny fomba mahasoa ny olona amin'izao fotoana izao.
Nilaza 'ny Tantara mamerina mihitsy'.
Koa nahoana no zava-dehibe ny fandalinana ny tantara na ny tantara. Satria efa nianatra ny teo aloha ny toe-tsaina ny olona fa hanampy hahatakatra ny fahadisoana sy izao tontolo izao isika.
Ny fanampiana ny asa ho an'ny mpiasa voakasika ny Hanjin
Сколько стоит в случае расторжения брака. Обсуждение